Whitepaper: Olee otú ịtụ anya akpaaka si abawanye ngbanwe ọnụego | Martech Zone
Whitepaper: Olee otú Prospecting Automation si abawanye Ngbanwe Ọnụego
Freshly uploaded anyị Akwụkwọ Ọbá Akwụkwọ (kwadoro site na Akwụkwọ Ekekọrịta) bụ mbipụta ezubere ma mepụtara maka Ahịa site n'aka anyị gị n'ụlọnga. The whitepaper a na-akpọ, Why You Need a Sales Prospecting Usoro.
Ahịa na-elekwasị anya na ha ala nke ire mmiri. Maka ụlọ ọrụ ndị nwere usoro ọpụpụ na-apụ apụ, nke a bụ ebe a na-eduga ndị ahịa ha maka ndị ọrụ ahịa ha ịgbaso.
Nsogbu nke Salesvue gosipụtara bụ na imirikiti azụmaahịa na-ahapụ ọtụtụ ego na tebụl maka ebumnuche ole na ole:
Ndi otu ahia enweghi usoro ịre ahịa ahịa ahịa ahịa nke ahụ na-enyere ha aka iwepụta ọrụ zuru oke na atụmanya ha nwere.
Ndị otu egwuregwu na-enwekarị iwu na-enweghị isi na-egbochi ha na-akpọ atụmanya n'oge.
Ndị otu egwuregwu na-akwụsị ịkpọ oku ohere kacha mma na nke kachasị ukwuu site na ịkwụsị ịkpọtụrụ na atụmanya ndị bụ isi.
Ahịa ahịa achọpụtala na ndị ahịa nwere ike ịbawanye ọrụ site na 50% na ntụgharị site na opekempe nke 20% mgbe a na-etinye igwe na-atụ anya na ndị otu ahịa. Nke a bụ ihe ọnụọgụgụ dị ka:
Tags: Na-atụ anyana-ele anya na akpaakaire ereAkwụkwọ edemede
Otu esi emepụta echiche di n'ime maka onye ahia ohuru
Nov 27, 2013 na 2:20 AM
Daalụ maka ịkekọrịta anyị na post a, nke a baara m uru. Biko nọgidenụ na-ekere òkè n'ụdị ozi a. Nke doro anya, daalụ na mbọ gị!